AirPods ပျောက်သွားရင် ဘာတွေလုပ်ဆောင်ဖို့လိုမလဲ -
တန်ဖိုးကြီးတဲ့ Smartphone ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Gadgets လေးတွေပဲဖြစ်ဖြစ် ဝယ်ယူထားပြီး အမြတ်တနိုးသုံးနေရင်းမတော်တဆ ပျောက်သွားတဲ့အခါ၊ ပျက်သွားတဲ့အခါ အရမ်းခံရခက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနေ့မှာတော့ Knowledge Sharing အနေနဲ့ Apple AirPods AirPods 2, AirPods Pro ပျောက်သွားရင် ဘာတွေလုပ်ဆောင်ဖို့လိုလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Apple Products အသုံးပြုနေကြတဲ့ မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ Apple Products တွေမှာ iCloud ဟာ ဘယ်လောက်အရေးပါသလဲဆိုတာကို သိရှိကြပြီးဖြစ်မှာပါခင်ဗျာ။ အဲ့ဒီလိုပဲ iCloud ရဲ့ Features တခုဖြစ်တဲ့ Find My iPhone ကလည်း iPhone ဖြစ်ဖြစ် အခြား Apple Products လေးတွေဖြစ်ဖြစ် မိမိရဲ့ Apple ID နဲ့အတူ ချိတ်ဆက်ထားပြီး Find My iPhone ကိုလည်း ဖွင့်ထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါမှသာ မတော်တဆ ပျောက်သွားခဲ့သည်ရှိသော် ပြန်ရှာဖို့အတွက် အခွင့်အရေးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
AirPods နဲ့ပါတ်သတ်ပြီး iCloud ရဲ့ Find My iPhone မှာ မတော်တဆ ပျောက်သွားခဲ့ရင် ပြန်ရှာလို့ရနိုင်ပေမယ့်Location ဘယ်မှာရှိနေသလဲဆိုတာ သိနိုင်တဲ့အချိန်ကတော့ မိတ်ဆွေရဲ့ AirPods က Charging Case ထဲမှာ မရှိနေဘူးသုံးနေတယ်ပေါ့ သို့မဟုတ် AirPods နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ iPhone နဲ့ Connected ဆိုပြီးဖြစ်နေမှသာ ပျောက်သွားခဲ့ရင် Location ကြည့်နိုင်မှာ၊ ရှာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ဆိုလိုတာက တကယ်လို့ အထက်ပါအခြေအနေတွေနဲ့မဟုတ်ပဲ AirPods က Battery ကုန်နေလို့ဖြစ်ဖြစ်၊ iPhone နဲ့Connected ဖြစ်မနေတာမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် ဖြစ်နေခဲ့ရင်တော့ ပျောက်သွားတဲ့ AirPods နဲ့ ချိတ်ဆက်ထားခဲ့တဲ့ iPhone နောက်ဆုံး Connected ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ Location ကိုပဲ သိရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
iCloud ကိုဝင်ပြီး Find My App ကနေရှာတဲ့အခါ ပျောက်သွားတဲ့ AirPods က တစ်ဖက်တည်းပျောက်တာလား? နှစ်ဖက်စလုံးပျောက်တာလားဆိုတာ ရှိပါသေးတယ်။ ဘာလို့ဆိုတော့ Find My iPhone ရဲ့ Maps မှာ Location ပြတဲ့အခါ AirPods တဖက်ကိုပဲ ပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဆို နှစ်ဖက်ပျောက်သွားရင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ AirPods တဖက်ရဲ့ Location သိတဲ့အခါ အဲ့ဒီ AirPods တဖက်ကိုအရင်ပြန်ယူပြီး Charging Case ထဲထည့်ပြီး Find My iPhone ရဲ့ AirPods Maps Location မှာ စောစောကပြနေတဲ့ Location ကို Refresh လုပ်မှသာ ကျန်တဖက်ကို ထပ်ပြီး Location ပြပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
iPhone ပဲဖြစ်ဖြစ် အခြား Apple Products ပဲဖြစ်ဖြစ် Find My iPhone ကနေ ပြန်ရှာတဲ့အခါ Location သိပေမယ့်ကျွန်တော်တို့လို နိုင်ငံမျိုးမှာက Maps Data တွေကလည်း သိပ်မတိကျတဲ့အတွက် Location သိတဲ့နားသွားပြီးပျောက်သွားတဲ့ Devices ကို Alarm သံပေးခိုင်းလို့လည်းရပါတယ်။ (အသံမြည်တဲ့အချိန်ကတော့ ခန့်မှန်း (၂) မိနစ်ဝန်းကျင်ဖြစ်ပါတယ်)
အပေါ်မှာပြောပြထားတာတွေကတော့ ပျောက်သွားခဲ့ရင် ပထမဦးဆုံးလုပ်ဆောင်သင့်တဲ့ အချက်တွေကို ပြောပြပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ အကယ်၍များ မိတ်ဆွေပျောက်သွားတဲ့ AirPods က ပြန်မတွေ့တော့ဘူးဆိုရင်တော့ အခြားလုပ်ဆောင်လို့ရတာလေးတွေ ရှိပါတယ်။
အဲ့ဒါတွေကတော့ မိတ်ဆွေပျောက်သွားတဲ့ AirPods က တစ်ဖက်တည်းလား? နှစ်ဖက်လား? ဒါမှမဟုတ် Charging Case ပျောက်တာလား? စသဖြင့် ပျောက်သွားတဲ့အပိုင်းလေးတွေကို Apple မှာပြန်ပြီး ကျသင့်တန်ဖိုးငွေနဲ့ Replace Service ရယူနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Win Mobile World မှကူးယူဖော်ပြသည်။
Previous iPhone တွေရဲ့ Battery Health ကျခြင်း အကြောင်း